Propovednik - Serbisch - Burmesisch Übersetzung und Beispiele
Sie suchten nach: propovednik (Serbisch - Burmesisch)
Ja propovednik bejah car nad Izrailjem u Jerusalimu.
ငါဓမ္မဒေသနာဆရာသည်၊ ယေရုရှလင်မြို့၌ ဣသရေလရှင်ဘုရင်ဖြစ်စဉ်တွင်၊
Tatina nad tatinama, veli propovednik, sve je tatina.
အနတ္တသက်သက်၊ အလုံးစုံတို့သည် အနတ္တဖြစ် ကြသည်ဟု ဓမ္မဒေသနာဆရာဟော၏။
Tatina nad tatinama, veli propovednik, tatina nad tatinama, sve je tatina.
အနတ္တသက်သက်၊ အနတ္တသက်သက်၊ ခပ်သိမ်းသောအရာတို့သည် အနတ္တဖြစ်ကြ၏။
Gle, to nadjoh, veli propovednik, jedno prema drugom, traeæi da razumem.
ဓမ္မဒေသနာဆရာ ဆိုသည်ကား၊ ငါရှာ၍ မ တွေ့သေး သောအရာကို တွေ့အံ့သောငှါ၊ တခုနောက် တခု စစ်ဆေးချင့်တွက်သောအခါ၊
Starae se propovednik da nadje ugodne reèi, i napisa ta je pravo, reèi istine.
ဓမ္မဒေသနာဆရာသည် နားထောင်ဘွယ်သော စကားကိုရှာ၍၊ ရေးထားချက်စကားသည် ဖြောင့်မတ် သောစကား၊ သမ္မာစကားဖြစ်၏။
A ne samo mudar bee propovednik, nego jo i narod uèae mudrosti, i motreæi i istraujuæi sloi mnogo prièa.
ဓမ္မဒေသနာဆရာသည် ပညာရှိသည်အတိုင်း၊ ပရိသတ်တို့အား ပညာအတတ်ကို သွန်သင်လေ့ရှိ၏။ လုံ့လဝိရိယပြုလျက် များစွာသော သုတ္တံစကားတို့ကို ရှာဖွေ၍စီရင်၏။
Za koje sam postavljen propovednik i apostol (istinu govorim u Hristu, ne laem), uèitelj neznaboaca, u veri i istini.
ငါသည်ထိုသက်သေခံသောသူ အရာ၌၎င်း၊ တမန်တော်အရာ၌၎င်း၊ ယုံကြည်ခြင်းတရားနှင့် သမ္မာ တရားကို တပါးအမျိုးသားတို့အား ဟောပြောသောဆရာ အရာ၌၎င်း ခန့်ထားတော်မူသောသူ ဖြစ်သည်ဟု ငါဆိုသော်၊ မုသားစကားကိုမဆို၊ မှန်သောစကားကိုဆို၏။
nijieri india (Englisch>Tagalog)i am eagerly waiting for your message ra (Englisch>Telugu)alasannya (Indonesisch>Schwedisch)gru articolato (Italienisch>Deutsch)tanġibbli (Maltesisch>Englisch)bulu video (Nepalesisch >Englisch)canis dei (Latein>Englisch)lies (Holländisch>Englisch)mahal ko (Tagalog>Französisch)translatores (Englisch>Maltesisch)amabilidades (Portugiesisch>Englisch)estote (Latein>Italienisch)sinamahan ang aking asawa sa ospital (Tagalog>Englisch)母象来 (Chinesisch (Vereinfacht)>Französisch)aspetta un attimo (Italienisch>Englisch)tetap (Indonesisch>Polnisch)langtidsundersøgelser (Dänisch>Holländisch)the open window nice summary for you 👌👌👌 (Englisch>Hindi)bulu cinem (Latein>Englisch)pichwade ko english me kya kehte hai (Hindi>Englisch)ye 102 number kiska hai (Hindi>Englisch)berjimat (Malaysisch>Englisch)sothai pal (Tamilisch>Englisch)poliisiviranomaiset (Finnisch>Portugiesisch)omvärldsbevakning (Schwedisch>Englisch)